Tonga tao amin'ny Apple Arcade ny mpilalao Disney sy Nickelodeon | Vaovao iPhone
Tonga tao amin'ny Apple Arcade ny mpilalao Disney sy Nickelodeon
Tamin'ny volana Aogositra lasa teo, ny sehatra famandrihana lalao Apple Arcade, mihoatra ny 200 lalao misy. Maro amin'ireo anaram-boninahitra tonga amin'ity sehatra ity dia tsy inona fa dikan-tenin'ny lohateny hita ao amin'ny App Store izay nesorina ny fividianana mba hahafahana manolotra azy ireo amin'ity sehatra ity, ka manimba ny ampahany amin'ny fampandehanana ny lalao.
Ny zoma ho avy izao, ny isan'ny anaram-boninahitra hita ao amin'ny Apple Arcade dia hanampy lohateny vaovao, indrindra roa: Disney Melee Mania y Nickeloden Extreme Tennis. Raha te hahalala bebe kokoa momba ireo lohateny roa ireo ianao dia manasa anao hanohy hamaky.
Lalao Disney Melee Mania Karazana kianja izay misy ekipa misy olona 3 miady amin'ny lalao 5 minitra. Anisan'ireo endri-tsoratra azontsika isafidianana dia Mickey Mouse, Buzz Lightyear, Elsa ...
Ity lohateny ity dia ho hita amin'ny iPhone, iPad, Mac ary Apple TV.
Efa nisy ny lalao noforonin'ny studio Mighty Bear Games ary, araka ny filazan'ny lehiben'ny mpanatanteraka azy, Simon Davis:
Faly izahay miara-miasa amin'i Disney mba hitondra ireo olo-malala ireo amin'ny lalao ady voalohany an'i Disney sy Pixar, azo alaina ao amin'ny Apple Arcade irery.
Ireo mpankafy dia hifaninana amin'ireo tompon-daka Disney sy Pixar amin'ny fomba arcade amin'ny ady mahafinaritra sy mikoropaka mba ho tafavoaka velona amin'ny korontana mikorontana ary hijanona ho eo amin'ny loha-laharana.
Lalao iray hafa ho avy tsy ho ela amin'ny Apple Arcade dia ny Nickelodeon Extreme Tennis, manasongadina ireo endri-tsoratra Nickelodeon malaza toa ny SpongeBob, Angelica, Rocko, Garfield sy ny hafa.
Ity lohateny ity dia manolotra antsika fomba maro samihafa mampifandona ny mpilalao amin'ny fiaviana Nickelodeon toy ny Bikini Bottom. Ao anatin'izany koa ny fomba tantara mpilalao tokana izay itadiavan'ny mpilalao handroso amin'ny fanamby tokana ho an'ny toetra tsirairay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Tonga tao amin'ny Apple Arcade ny mpilalao Disney sy Nickelodeon
Podcast 13x15: Toy izao ny 2021 an'ny Apple
Otterbox MagSafe Cases sy Dock ho an'ny iPhone: fampiononana, fiarovana ary kalitao